मुना कार्की ह’त्याकाण्ड: सिसी क्यामेरा फुटजमा देखियाे कामदारकाे त्यस्ताे दृश्य ! (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > मुना कार्की ह’त्याकाण्ड: सिसी क्यामेरा फुटजमा देखियाे कामदारकाे त्यस्ताे दृश्य ! (भिडियो सहित)
admin February 11, 2020 भिडियो, समाचार	0
ललितपुर । विहान १० वजेर २० मिनेटको सयममा विजय चौधरी भान्सा कोठा पसे । खाना पकाईरहेकी मुना कार्कीको घाँटीमा पछाडिबाट डोरी लगाएर र बल लगाएर उनलार्इ भूइँमा लडाए ।भुईमा लडेकी मुना प्रतिवाद गर्छिन् तर पनि चौधरी कपाल समातेर जोडतोडले टाउको भुईमा ठोकाउँछन् । करीव पाँच मिनेट लामोे या’तनाबाट शिथिल बनेकी मुनालाई नजिकै रहेको पलाष्टिकको पिर्काले टाउको र अनुहारमा जोडतोडले हि’र्काउँछन्, मुनाको टाउकोमा हि’र्काउँदा हिर्काउँदै पिर्का समेत दुई टुक्रा हुन्छ ।
मुना अचेत हुन्छिन्, त्यसपछि कामदार चौधरी आफ्नो साथमा रहेको डोरी लिएर डाइनिङ रुपको अगाडि ढोका छेउमै आ’त्मह’त्या गर्छन् । सिसिक्यामेरा फुटेज अनुसार, विहान १०.२० देखि १०.४० वजेसम्म उक्त ह’त्या घटना भएको हो ।विगत चारवर्षदेखि घरेलु कामदारको रुपमा भित्रिएका चौधरीलाई कार्की परिवारले छोरा समानको व्यवहार गर्ने गरेको छिमेकीहरू बताउँछन् । विहान पूर्वसचिव कार्की दर्शन गर्न पशुपतिनाथ र अर्की कामदार १२ वर्षीय छोरालाई विद्यालय पु¥याउन गएको वेलामा उक्त घ’टना भएको हो ।
सो घ’टना रहस्यमय भएकाले थप अनुसन्धान जारी रहेको भनाई प्रहरीको छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक हृदय थापाले घरमुली मुनाको ह’त्या र आ’त्मह’त्याको सम्वन्धमा अनुसन्धान जारी रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल प्रहरीले पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी श्रीमती मुनाको ह त्या भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार उहाँको ह त्या भएको आशङ्कामा घरको सिसीटिभी फुटेजलगायत अन्य प्रमाणको अनुसन्धान भइरहेको छ ।ललितपुरको सानेपास्थित आफ्नै घरको भान्साकोठामा बिहान अ चेत अवस्थामा भेटिनुभएकी कार्कीको उपचारका क्रममा स्टार अस्पतालमा निधन भएको थियो । उहाँको टा उकामा
लागेको ग म्भीर चोटका कारण निधन भएको हो । चिकित्सकका अनुसार घाँ टी र हातमासमेत नी”’लडाम भेटिएको छ । घटनाका समयमा पूर्वसचिव कार्की ‘मर्निङवाक’मा निस्कनुभएको थियो ।सोही घरमा कामदारका रूपमा बसेका विजय चौधरी भने घरको ‘डाइनिङ’ कोठामा झु”’ण्डि”एको अवस्थामा मृ’त फेला परेका थिए । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उहाँको ह”’त्यामा स्वयं चौधरीको संलग्नता देखिएको जनाइएको छ । घटना घटाएर उनले देहत्याग गरेको अनुमान छ तर प्रहरीले घटनाको औपचारिक जानकारी गराएको छैन ।
कार्कीले आफन्त र प्रहरीसँग बताउनुभए अनुसार उनी पशुपतिनाथ मन्दिर गएर फर्किएपछि यो घटना भएको थाहा पाउनुभएको थियो। दुई छोरी र एक छोराकी आमा मुनाको ह त्या के कारणले गरियो भन्नेबारे प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। अर्जुनले बताउनु भए अनुसार मुना अ चेत अवस्थामा ल’डि’रेहेकी थिइन्। उनले तत्काल प्रहरीमा खबर गरेपछि घटनास्थलमा प्रहरी पुगेर मुनालाई उपचारार्थ सानेपास्थित स्टार हस्पिटल पुर्‍याइएको थियो। तर, मुनाको निधन भएको थियो।अर्जुनको घरमा सुत्ने कोठा र बाथरुम बाहेक अन्य स्थानमा सीसीटीभी छ। प्रहरीले अर्जुनको भनाइ, घरमा काम गर्ने अन्य कामदार र सीसीटीभीलाई नै आधार बनाएर अनुसन्धान दायरा फराकिलो बनाएको छ।
प्रहरी घटनास्थलमा पुग्दा मुना भान्सा कोठामा र ग ता म्य भएर ल डि र हेकी थिइन् भने कामदार विजय नाइलनको डो रीले पा सो लगाएको अवस्थामा डाइनिङ टेबलमा ल डि र हेका थिए। प्रहरी पुग्दाको अवस्था र अर्जुनले प्रहरीमा दिएको जानकारी दुरुस्त मिले पनि मुनाको ह त्या र विजयको देहत्यागको प्रसंग खुल्न सकेको छैन।महानगरीय प्रहरी अ पराध महाशाखा र ललितपुर प्रहरी परिसरले संयुक्त रुपमा अनुसन्धान थालेका छन्।
१० बजेर २३ मिनेटमा चौधरीले मुनाको टा उकोमा केही चिजले सा तपट क हि र्का एको पनि सिसिटिभी फुटेजमा देखिएको छ। त्यसपछि करिब ४५ मिनेटसम्म उनी घटनास्थलमै ओहोरदोहोर गरिरहेको देखिएको छ। सिसिटिभी फुटेजअनुसार ११ बजेर ८ मिनेटसम्म उनी किचेनमा ओहोरदोहोर गरिरहेको देखिएको छ।११ बजेर २० मिनेटमा पूर्वसचिव कार्की घरमा आइपुग्दा चौधरी झु न्डि ए को अवस्थामा देखिए भने मुना
किचेनमा ल डि रहेका थिए।१० बजेर १० मिनेटमा मुनालाई घाँ टीमा डो रीले न्याँ केर ल डा उनुअघि पनि किचेनबाहिर चौधरी ओहोरदोहोर गरिरहेको सिसिटिभी फुटेजमा देखिएको छ।१० बजेर १० मिनेटमा मुनालाई घाँ टीमा डो रीले न्याँ के र ल डा ए पछिको १३ मिनेटसम्म चौधरीले के गरे भन्ने चाहिँ खुल्न सकेको छैन। चौधरीको ‘अन्डरवेयर’मा र गत र वि र्य ल त्पति एको देखिएको छ। पूर्वसचिव पत्नी मुनाको मा सिकश्रा व चलिरहेको पनि प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ।